C/raxmaan Faroole Madaxweynaha Somalia hayimaado Gaalkacyo si meesha looga saaro tuhumada +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
C/raxmaan Faroole Madaxweynaha Somalia hayimaado Gaalkacyo si meesha looga saaro tuhumada +Cod
Madaxweynihii hore ee Maamulka Puntland hadana kamid ah Senetarada Puntland u matalaya aqalka sare Mudane C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroole ayaa ugu baaqay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh uu yimaado magaalada Gaalkacyo uuna soo faragliyo dagaalka ka socda magaaladaasi.
Faroole ayaa sheegay in colaada ka aloosan magaalada Gaalkacyo aysan aheyn mid ku eg labo maamul, balse ay tahay mid qaran, waxa uuna tilmaamay in Gaalkacyo ay taariikh hore ku laheyd dagaaladii sukeeye ee dalka ka dhacay.
Waxa uu xusay Faroole in Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid kaligiis uusan maareyn karin xalna ka keeni karin colaada Gaalkacyo, waxa uuna sheegay in ay jiraan Tuhumo badan iyo waxyaabo uu sheegay in la isla dhax marayo.
”Waxaan ugu baaqayaa Madaxweynaha Soomaaliya in uu yimaado Gaalkacyo uuna gacan ka geesto colaada ka aloosan magaaladaasi, waxaa jira tuhumo iyo arimo siyaasadeed oo la isla dhax marayo si meesha uga baxaan tuhumada jira bal imaw Gaalkacyo, Ra’iisul Wasaaraha kaligiis ma maareyn karo colaada taagan”, Ayuu yiri Faroole.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole Waxa uu sheegay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh hadii uusan imaanin magaalada Gaalkacyo in run loo qaadan karo tuhumada jira uusan cadeyn waxa ay yihiin tuhumadaasi.
Magaalada Gaalkacyo ku dhawaad mudo bil ah waxaa ka socda dagaal u dhaxeeya Ciidamada Maamulada Puntland iyo Galmudug, waxaana lagu guul dareestay in dagaalkaasi la joojiyo xalna laga gaaro waxa dhaliyay.